Mpanamboatra sarimihetsika TPU Dichroic - Mpamatsy sarimihetsika TPU China Dichroic TPU
0.4mm Dichroic Iridescent TPU Film ho an'ny fanaovana kiraro, kitapo ary haingon-trano
Izahay dia manome Dichroic Iridescent TPU film 2020 Magical Material amin'ny fanaovana kiraro, kitapo ary haingon-trano. Izahay dia niavaka tamin'ny horonan-tsary haingo nandritra ny 15 taona mahery, manarona ny ankamaroan'ny tsena eropeana sy amerikana. Manantena ny ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina izahay.
0.2mm Iridescent TPU Film ho an'ny fanaovana kiraro, kitapo ary haingon-trano
Iridescent TPU Film Rainbow Color Magical Material amin'ny fanaovana kiraro, kitapo ary haingon-trano dia vita amin'ny sary mihetsika TPU sy PET iridescent. Izy io dia fitaovana milamina sy tonga lafatra amin'ny haingon-trano kiraro kitapo sy karazana endrika rehetra. Izahay dia niavaka tamin'ny haingon-tsarimihetsika haingon-trano nandritra ny 15 taona mahery, ny vokatra dia malaza amin'ny ankamaroan'ny tsena Eoropeana sy amerikana. Manantena mafy izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina. Mifandraisa aminay izao, hiezaka ny tratry ny herinay izahay hihaona amin'ny fahafaham-ponao.